China Kutendeuka uye kugaya composite machining zvikamu vagadziri uye vatengesi | Lingjun
Zvakanakira kutenderedza uye milling compound processing:
Kubatsira 1: Kucheka kwepakati;
Advantage 2, nyore kucheka kwekukurumidza;
Advantage 3, iyo workpiece kumhanya yakaderera;
Advantage 4, diki deformation inopisa;
Advantage 5, imwe-nguva kupera;
Advantage 6, kuderedza kubhenda deformatio
Zvibereko zvechigadzirwa: hapana burr, batch kumberi, kushata kwepamusoro kunodarika ISO, kunyatsojeka
Zita rechigadzirwa: Kushandura uye kugaya composite machining zvikamu
Maitiro echigadzirwa: kutendeuka uye kugaya komputa
Product zvinhu: 304 uye 316 Stainless simbi, mhangura, simbi, aruminiyamu, etc.
Material maitiro: yakanaka corrosion resistance, heat resistance, low tembiricha simba uye michina zvinhu
Kushandiswa kwechigadzirwa: chinoshandiswa mumidziyo yekurapa, midziyo yemuchadenga, midziyo yekutaurirana, indasitiri yemotokari, indasitiri yemaziso, zvikamu zveshaft, midziyo yekugadzira chikafu, drones, nezvimwe.
Kururama: ± 0.01mm
Proofing cycle: 3-5 mazuva
Zuva nezuva kugadzirwa simba: 10000
Kurongeka kwemaitiro: kugadzirisa zvinoenderana nevatengi kudhirowa, zvinhu zvinopinda, nezvimwe.
Zita reBrand: Lingjun
Advantage 1, Kucheka kwepakati:
Iyo mbiri-spindle inotenderedza-milling yakasanganiswa machining nzira inzira yekucheka inopindirana. Iyi mhando yekucheka kwepakati inobvumira chishandiso kuti ive nenguva yakawanda yekutonhora, nekuti zvisinei kuti ndezvipi zvinhu zvinogadziriswa, tembiricha inosvika nechishandiso panguva yekucheka yakaderera.
Advantage 2, nyore kucheka-kumhanya-mhanya:
Kuenzaniswa neyechinyakare kutendeuka-kugaya tekinoroji, iyi mbiri-spindle inotenderedza-milling yakasanganiswa yekugadzira tekinoroji iri nyore kuita yakakwirira-kumhanya kucheka, saka zvese zvakanaka zvekucheka-kumhanya zvinogona kuratidzwa mune mbiri-spindle kutendeuka-milling yakasanganiswa kugadzirisa. , zvakadai Zvinonzi iyo yakasanganiswa yekucheka simba ye-dual-spindle kutendeuka uye kugaya ndeye 30% yakaderera pane iyo yechinyakare yekucheka kwepamusoro, uye iyo yakaderedzwa yekucheka simba inogona kuderedza radial simba re workpiece deformation, iyo inogona kubatsira pakugadzirisa. yezvikamu zvakatetepa chaizvo. Uye kuwedzera kukurumidza kugadzirisa kwezvikamu zvakatetepa-zvakakomberedzwa, uye kana simba rekucheka riri diki, mutoro uri pachishandiso uye mudziyo wemuchina zvakare mudiki, kuitira kuti iko kurongeka kweiyo mbiri-spindle inotenderedza-milling komputa muchina chishandiso. inogona kudzivirirwa zviri nani.
Advantage 3, iyo workpiece kumhanya yakaderera:
Kana iyo yekutenderera kumhanya kweiyo workpiece yakadzikira, chinhu hachizoremara nekuda kwesimba recentrifugal paunenge uchigadzira zvikamu zvakatetepa-madziro.
Advantage 4, diki deformation yekupisa:
Paunenge uchishandisa iyo mbiri-spindle inotendeuka-milling komputa, iyo yese yekucheka maitiro yakatovharirwa, saka chishandiso uye machipisi zvinobvisa kupisa kwakawanda, uye tembiricha yechishandiso ichave yakaderera, uye deformation yekupisa haizoitike nyore.
Advantage 5, kupedzisa-kamwe chete:
Iyo mbiri-spindle inotenderedza-milling composite mechanic muchina chishandiso inobvumira maturusi ese kuti agadziriswe kuti apedze zvese zvinobhowa, kutenderedza, kudhirowa, uye kugaya maitiro mune imwe yekurovera maitiro, kuitira kuti dambudziko rekutsiva muchina chishandiso rigone kudzivirirwa. Pfupisa kutenderera kwekugadzirwa kweworkpiece uye kugadzirisa, uye dzivirira matambudziko anokonzerwa nekudzokororwa clamping.
Advantage 6, kuderedza kubhenda deformation:
Kushandisa iyo mbiri-spindle inotenderedza-milling composite machining nzira inogona kuderedza zvakanyanya kubhenda deformation yezvikamu, kunyanya kana kugadzirisa zvimwe zvitete uye kureba zvikamu zvisingagone kutsigirwa nepakati.
3.2. Dimensional kunyatsoita zvinodiwa
Iri bepa rinoongorora zvinodikanwa zvedimensional kurongeka kwedhirowa, kuti ritonge kana richigona kuwanikwa nekutendeuka maitiro, uye kuona nzira yekudzora kurongeka kwedimensional.
Mukuita kwekuongorora uku, kumwe kutendeuka kwedimension kunogona kuitwa panguva imwe chete, sekuverenga kwekuwedzera dimension, absolute dimension uye dimension chain. Mukushandiswa kweCNC lathe kutendeuka, saizi inodiwa inowanzotorwa seavhareji yehukuru uye hudiki muganho saizi sehukuru hwaro hwehurongwa.
4.3. Zvinodiwa zvechimiro uye chimiro chechokwadi
Chimiro uye kushivirira kwechinzvimbo kwakapihwa pakudhirowa hwaro hwakakosha kuti uve nechokwadi chechokwadi. Munguva yekugadzira, iyo yekumisikidza datum uye kuyerwa datum kunofanirwa kutariswa zvinoenderana nezvinodiwa, uye kumwe kugadziridzwa kwehunyanzvi kunogona kuitwa zvinoenderana nezvinodiwa zvakakosha zveCNC lathe, kuitira kuti inyatso kudzora chimiro uye chinzvimbo chechokwadi chelathe.
shanu pfungwa shanu
Zvinodiwa zvekukasharara pamusoro
Iko kushata kwepamusoro chinhu chakakosha chinodiwa kuti ive nechokwadi chepamusoro micro precision, uye zvakare ndiyo hwaro hwekusarudzwa kwakanaka kweCNC lathe, kucheka chishandiso uye kutsunga kwekucheka paramita.
nhanhatu pfungwa nhanhatu
Zvinhu uye kupisa zvinoda kurapwa
Izvo zvinhu uye kupisa zvinodikanwa zvekurapa zvakapihwa mudhirowa ndiyo hwaro hwekusarudza maturusi ekucheka, CNC lathe modhi uye kuona yekucheka ma paramita.
Mashanu axis vertical machining centre
Iyo shanu axis shanu axis vertical machining centre chiridzwa chinoshandiswa mumunda weinjiniya. Mushure mekuti workpiece yakasungirirwa pane machining centre kamwe chete, iyo dhijitari yekudzora sisitimu inogona kudzora chishandiso chemuchina kusarudza otomatiki uye kushandura chishandiso zvinoenderana nematanho akasiyana, uye otomatiki shandura kumhanya kwespindle, chiyero chekudya, nzira yekufambisa yechishandiso iyo workpiece uye mamwe mabasa ekubatsira, Kuti upedze kugadziridzwa kwemaitiro akawanda pane akati wandei nzvimbo yebasa. Uye kune akasiyana siyana ekuchinja kwechishandiso kana maturusi ekusarudza mabasa, kuitira kuti hunyanzvi hwekugadzira huvandudzwe zvakanyanya.
Mashanu axis vertical machining centre inoreva nzvimbo yekugadzira iyo spindle axis yakamisikidzwa yakatwasuka netafura yekushanda. Iyo inonyanya kukodzera kugadzira ndiro, ndiro, mold uye madiki magomba akaomarara. Mashanu axis vertical machining Center anogona kupedzisa kugaya, kufinha, kudhiraivha, kubaya uye kucheka shinda. Mashanu axis yakatwasuka machining centre ndeye matatu axis maviri yekubatanidza, iyo inogona kuona matatu axis matatu yekubatanidza. Mamwe anogona kudzorwa nematemo mashanu kana matanhatu. Iko kureba kwembiru yeshanu axis vertical machining centre ishoma, uye machining emhando yebhokisi remhando yebasa rinofanirwa kudzikiswa, izvo zvinova zvisizvo zveshanu axis vertical machining centre. Nekudaro, iyo shanu axis vertical machining centre yakanakira workpiece clamping uye chinzvimbo; Iyo yekufamba track yekucheka chishandiso iri nyore kuona, iyo debugging chirongwa chiri nyore kutarisa uye kuyera, uye matambudziko anogona kuwanikwa munguva yekuvhara kana kugadziridzwa; Mamiriro ekutonhora ari nyore kumisikidza, uye mvura yekucheka inogona kusvika kune chishandiso uye machining pamusoro zvakananga; Iwo matatu maaxes ekubatanidza anowirirana neCartesian coordinate system, saka manzwiro acho ane hunyanzvi uye anowirirana nekona yekuona yedhirowa. Chips zviri nyore kubvisa uye kudonha, kuitira kuti udzivise kukwenya nzvimbo yakagadziriswa. Kuenzaniswa neinoenderana yakachinjika machining Center, ine zvakanakira chimiro chakareruka, nzvimbo diki yepasi uye mutengo wakaderera.
Hombe CNC muchina maturusi
Iyo CNC mudziyo ndiyo musimboti weCNC muchina chishandiso. Mazuva ano CNC zvishandiso zvese zviri muchimiro cheCNC (kombuta nhamba yekudzora). Ichi chishandiso cheCNC chinowanzo shandisa akawanda mamicroprocessor kuti aone iyo nhamba yekudzora basa nenzira yesoftware yakarongwa, saka inodaidzwa zvakare kunzi software NC. CNC sisitimu inzvimbo yekudzora sisitimu, inodudzira yakanakira mafambiro trajectory zvinoenderana nedata rekuisa, uye yozoburitsa kune zvikamu zvinodiwa pakugadzira. Naizvozvo, iyo NC mudziyo unonyanya kuumbwa nezvikamu zvitatu zvakakosha: kuisa, kugadzirisa uye kubuda. Mabasa ese aya akarongwa zvine mutsindo nechirongwa checomputer, kuitira kuti hurongwa hwese hushande mukubatana.
1) Input mudziyo: isa iyo NC rairo kune iyo NC mudziyo. Zvinoenderana neakasiyana chirongwa chinotakura, kune akasiyana ekuisa michina. Kune kupinza kwekhibhodi, kupinza dhisiki, yakananga kutaurirana modhi yekuisa yekadhi / cam system uye DNC (yakananga manhamba kutonga) yakabatana kune yepamusoro komputa. Parizvino, masisitimu mazhinji achine fomu yekuisa yebepa tepi yemuchina wekuverenga photoelectric.
(2) Pepa bhandi rekuisa maitiro. The bepa tepi photoelectric kuverenga muchina unogona kuverenga chikamu chirongwa, zvakananga kudzora kufamba kwemuchina chishandiso, kana kuverenga zviri mukati mebepa tepi mundangariro, uye kutonga mafambiro emuchina chishandiso nechikamu chirongwa chakachengetwa mundangariro.
(3) MDI manual data input mode. Mushandi anogona kupinza mirairo yechirongwa chekugadzira nekushandisa kiibhodhi pane pani yekushandisa, iyo yakakodzera zvirongwa zvipfupi.
Mukugadzirisa mamiriro ekudzora mudziyo, iyo software inoshandiswa kuisa iyo yekugadzirisa chirongwa uye yakachengetwa mundangariro yechishandiso chekudzora. Iyi nzira yekupinza inogona kushandiswa zvakare. Iyi nzira inonyanya kushandiswa mumanyorerwo ehurongwa.
Pane iyo NC mudziyo ine sesheni programming basa, zvinoenderana nezvinetso zvinokurudzirwa pachiratidziro, akasiyana menyu anogona kusarudzwa, uye chirongwa chekugadzirisa chinogona kugadzirwa otomatiki nekuisa iyo yakakodzera dimension nhamba nenzira yekukurukurirana kwekombuta.
(1) DNC yakananga nhamba yekudzora yekuisa maitiro inogamuchirwa. Iyo CNC system inogamuchira zvinotevera zvikamu zvechirongwa kubva pakombuta ichigadzira zvikamu zvepurogiramu mukombuta yepamusoro. DNC inonyanya kushandiswa mune yakaoma workpiece yakagadzirwa nekadhi / cam software uye yakananga kugadzira chikamu chirongwa.
2) Kugadzirisa ruzivo: mudziyo wekupinza unoendesa ruzivo rwekugadzirisa kuCNC unit uye inoiunganidza muruzivo rwunozivikanwa nekombuta. Mushure mekunge chikamu chekugadzirisa ruzivo chinochengeta uye chinochigadzirisa nhanho nhanho zvinoenderana nechirongwa chekudzora, chinotumira chinzvimbo uye nekumhanyisa mirairo kune servo system uye main motion control chikamu kuburikidza nekubuda unit. Input data yeCNC system inosanganisira: rondedzero yeruzivo rwezvikamu (pokutanga, poindi yekupedzisira, mutsara wakatwasuka, arc, nezvimwewo), kumhanya kwekugadzirisa uye mamwe ebetsero machining ruzivo (senge shanduko yechishandiso, shanduko yekumhanya, inotonhorera switch, nezvimwewo), uye chinangwa chekugadzirisa data ndechekupedzisa gadziriro isati yaitwa interpolation. Iyo data yekugadzirisa chirongwa inosanganisirawo chishandiso radius muripo, kukurumidza kuverenga uye yekubatsira basa kugadzirisa.
3) Chishandiso chekuburitsa: mudziyo wekuburitsa wakabatana neiyo servo michina. Iyo yekuburitsa mudziyo inogamuchira yakabuda pulse ye arithmetic unit zvinoenderana nekuraira kwemutongi, uye inoitumira kune servo control system yekurongeka yega yega. Mushure mekusimudzira simba, iyo servo system inotyairwa, kuitira kudzora kufamba kwemuchina chishandiso zvinoenderana nezvinodiwa.
Kuunzwa kweCNC hombe muchina chishandiso 3
Muchina wemuchina ndiwo muviri mukuru weCNC muchina. Inosanganisira mubhedha, chigadziko, mbiru, danda, chigaro chinotsvedza, tafura yekushanda, musoro wemusoro, magadzirirwo ezvekudya, chibatiso chemidziyo, otomatiki chishandiso chekuchinja chishandiso uye zvimwe zvemakanika zvikamu. Icho chikamu chemuchina chinopedzisa otomatiki marudzi ese ekucheka pane CNC muchina chishandiso. Kuenzaniswa neyechinyakare muchina chishandiso, iyo huru muviri weCNC muchina chishandiso ine zvinotevera zvimiro zvemaitiro
1) Iyo nyowani yemuchina chishandiso chimiro ine yakanyanya kuomarara, yakakwira seismic kuramba uye diki deformation yekupisa inogamuchirwa. Kuti uvandudze kuomarara uye anti-seismic kuita kwechishandiso chemuchina, iyo static kuomarara kwechimiro sisitimu, kunyorovesa, kunaka kwezvikamu zvezvimiro uye kutenderera kwechisikigo kunowanzo kuvandudzwa, kuitira kuti muviri mukuru wechishandiso chemuchina. inogona kuchinjika kune inoenderera uye otomatiki yekucheka zvinodiwa zveCNC muchina chishandiso. Iyo pesvedzero yemafuta deformation pamushini mukuru inogona kudzikiswa nekuvandudza marongero echishandiso chemuchina, kudzikisira kupisa, kudzora kukwira kwekushisa uye kutora muripo wekupisa wekupisa.
2) High performance spindle servo drive uye feed servo drive zvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya kupfupisa cheni yekutapurirana yeCNC muchina maturusi uye kurerutsa chimiro chemuchina wekufambisa sisitimu yematurusi emuchina.
3) Gamuchira yakakwira kutapurirana kunyatsoita, kurongeka kwepamusoro, hapana gap kutapurirana mudziyo uye zvikamu zvinofamba, senge bhora screw nut pair, epurasitiki inotsvedza gidhi, mutsara rolling gwai, hydrostatic gwara, nezvimwe.
Chishandiso chekubatsira cheCNC muchina chishandiso
Chishandiso chekubatsira chinodiwa kuti ive nechokwadi chekutamba kwakazara kwekushanda kweCNC muchina maturusi. Zvishandiso zvakajairika zvekubatsira zvinosanganisira: pneumatic, hydraulic mudziyo, chip yekubvisa mudziyo, kutonhora uye lubrication mudziyo, tafura inotenderera uye CNC inoparadzanisa musoro, dziviriro, mwenje uye zvimwe zvinobatsira.
Zvakapfuura: CNC lathe machining zvikamu
Zvinotevera: Milling machine
Precision Machining Zvikamu